अमेरिकामा गृहयुद्ध : सजाय भने विश्वका सबै मुलुकलाई !
हेर्नुस् यही देखाउँछ १ सय ५५ वर्षको पेट्रोलियम पदार्थको भाउले
प्रकाशित मिति : २०७३ पौष १३ बुधबार , ४,८०६ पटक हेरिएको
काठमाडौं । नेपालमा कायम गरिने पेट्रोलियम पदार्थको भाउ पूरापुर मात्रामा अन्तराष्ट्रिय बजारमा रहेको भाउले निर्धारण गर्ने गरेको छ । किनकी हामीहरु विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थमा अन्तराष्ट्रिय बजारमा नै निर्भर रहेका छौं । जुन अस्वभाविक मान्न सकिँदैन ।
पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प खोज्न सकिन्छ । तर, यो अरुसँग निर्भर हुन्न भन्नको लागि अमेरिका जस्ता मुलुकहरुले समेत सकिरहेका छैनन् । तर, मंगलबार मात्रै हाम्राकुराले लेखिसकेको जापानमा पेट्रोलको विकल्पको खोजी अन्तिम चरणमा पुगेको कुरालाई आत्मसाथ गर्ने हो भने धेरैहदसम्म पेट्रोलियम पदार्थको खपत भने घट्न सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कुनै समस्या सिर्जना भयो भने सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थको माध्यमबाट विश्वभरी नै यसको प्रभाव देखिन्छ । अझ यो अमेरिका लगायतका मुलुकमा त परेको आन्तरिक समस्याको समेत पीडा विश्वले भोग्नुपर्ने गरेको इतिहाँसका पानामा भेट्न सकिन्छ ।
विगत १ सय ५५ वर्षको पेट्रोलियम पदार्थ व्यापारको इतिहासले पनि यही देखाएको छ कि विश्वमा त्यस्ता कुनैपनि मुलुक आन्तरिक गृहयुद्धमा फसेको अवस्थामा समेत त्यसको प्रत्यक्ष असर तेलको माध्यमबाट विश्वले भोग्नु पर्छ ।
सन् १८६२ देखि १८६५ सम्म विश्वमा तेलको भाउ सबैभन्दा उच्च विन्दूमा पुगेको तथ्याङ्क गोल्डमेन स्याच् ग्लोबल इन्भेष्टमेन्ट रिसर्चले देखाएको छ । २०१४ सालसम्म गरेको उसको रिसर्चले त्यो ३ वर्षको समयावधिमा कच्चा तेलको मुल्य १ सय २२ अमेरिकी डलर प्रति ब्यारेलसम्म पुगेको देखाएको छ । त्यतिबेला अमेरिकी गृहयुद्ध चलिरहेको थियो । यसैको असरले गर्दा सो समयमा १ सय ५५ वर्षकै सबैभन्दा बढी मुल्य तेलको बेहोर्नु परेको थियो ।
त्यसपछिको सबैभन्दा उच्च विन्दूमा तेलको मुल्य सन् २०११ सालमा पुगेका छ । त्यतिबेला कच्चा तेल समग्रमा हेर्दा १ सय १७ अमेरिकी डलर प्रति व्यारेलसम्म पुगेको थियो । त्यही दुई समयको बीचमा पनि १९८० र २०००मा तेलको मुल्य आकाशिएको देखिन्छ ।
यी दुई वर्षमा क्रमशः १०५ र १०७ अमेरिकी डलर प्रति व्यारेल पुगेको अध्ययनले देखाएको छ । यसरी मुल्य बढेको समय १९८० मा युद्धको कारणले आपूर्ति हुन नसक्दा माग बढी यसको मुल्य पनि बढेको हो र २००० मा भने एशियाको बढ्दो विकासका कारण तेलको माग उत्पादनको तुलनामा बढी हुन पुगेकोले कुल्य बृद्धि भएको बताईएको छ ।
त्यस्तै, १९३० मा भने तेलको मुल्य सबैभन्दा न्यून विन्दूमा पुगेको देखिएको छ । त्यस्तैगरी, १८९१ मा पनि १९३० कै हाराहारीमा मुल्य न्यून अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । यसरी तेलको मुल्य घट्नुको कारण भने चर्काे आर्थिक मन्दीका कारण तेलको माग कम भई तेलको मुल्य पनि न्यून भएको देखिन्छ ।
अर्काको भरमा तेलको मुल्य
आज अर्थात् बुधबार विश्वमा तेलको मूल्य ५३.९ अमेरिकी डलर प्रति व्यारेल पुगेको छ । यो पनि सामान्य भन्दा बढी रहेको यस अघिको तथ्याङ्कले देखाएको छ । तर पनि यो अमेरिकी गृहयुद्धको समयमा पुगेको मूल्य भन्दा २.२५ प्रतिशत कम हो ।
यसरी अमेरिकाको गृहयुद्धसँग कुनैपनि सरोकार नै नरहेका विश्वका मुलुकहरु त्यही गृहयुद्धको कारण मूल्यबृद्धिको चपेटामा परेको देखिन्छ । त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थ नभएर पनि नहुने तर, हुँदा पनि सानो कारणले पनि मुल्य बृद्धि भईहाल्ने प्रवृत्तिको रहेको देखिएको छ । यसको विशेष मार नेपाल जस्तो अल्प विकसित देशलाई पर्ने गरेको छ ।
कहिले र किन भएको थियो अमेरिकामा गृहयुद्ध ?
अमेरिकामा १८६१ देखि १८६५ सम्म गृहयुद्ध चलेको थियो । दासताको विरोध, वर्गबादको विरोध, आफ्नाहरुलाई गरिनेगरेको संरक्षणवादको विरोध, प्रदेशको अधिकार, प्रादेशिक सेनाको व्यवस्था लगायतका मागहरु राखी त्यतिखेर आन्दोलन भएको थियो ।
तत्कालीन समयमा १८६१ अप्रिल महिनामा आन्दोलनकारीहरुले सरकारी किल्लामाथि हमलागरेपछि युद्ध औपचारिक रुपमा सुरु भएको थियो । जुन १८६५ सम्म चल्यो । अमेरिकाको पश्चिमी भूमिमा भएको उक्त युद्धमा ६ लाख २० हजारदेखि ७ लाख ५० हजारसम्म दुबैपक्षको गरी सेनाको ज्यान गएको अनुमान गरिएको छ । तेलको मूल्य कहिले के कारणले घटेको थियो भन्ने जानकारी विस्तृतमा हामी आगामी अंकमा प्रस्तुत गर्नेर्छौ ।
अमेरिकाले सवै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताको उलंघन गरेको रुसको आरोप
उत्तर कोरिया वार्ताको पोको बोकेर दक्षिण कोरियाली विशेषदूत हिँडे अमेरिका
अमेरिकामा नेपालीले स्थपना गरे आफ्नै स्वामित्वमा मन्दिर
अमेरिकाको बिभिन्न भागमा नेपाली तराइ समुदायले गठन गर्‍यो नयाँ समिती
किन सुधार हुन सकेन अमेरिका - रुस सम्बन्ध